Sahirana ny fizahantany any Bermuda: Tsiambaratelo nambara
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Bermudes » Sahirana ny fizahantany any Bermuda: Tsiambaratelo nambara
90 minitra monja avy eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia i Bermuda ary eo amin'ny 7 ora eo ho eo miala an'i Londres, saingy toa tontolo sy paradisa eto an-tany raha COVID-19 no resahina.
Tambajotra fizahan-tany manerantany nandre tamin'i Glenn Jones ireo mpikambana omaly. Glenn no tale jeneraly vonjimaika ao amin'ny BFahefana fizahantany ermuda
Ny mpikambana WTN no nanasa azy Cordell Riley, Tale mpitantana ny profil ao Bermuda amin'ny adihevitra momba ny Livestream.travel. Profiles of Bermuda dia orinasa iray izay manao tombana amin'ny olombelona, ​​fanofanana ary fampandrosoana, ary koa ny fikarohana momba ny tsena, asa ary fizahantany.
Ny firenena Island izay misy olona latsaky ny 63,000 amin'izao fotoana izao dia manana tranga maherin'ny 177 an'ny COVID-19 miaraka amina tranga matotra 4. Hatramin'ny fiparitahan'ny Coronavirus, Bermuda dia nijaly 161 isan-tapitrisa raha oharina amin'ny 1,650 Belzika voarakitra na 1028 ho an'i Etazonia, na 1040 ho an'ny UK.
Ny fizahantany dia zava-dehibe amin'ny toekarena ho an'ny nosy 26 kilaometatra toradroa, ary mandeha tsara. Ny fizahan-tany Bermuda dia miaraka amina sarany, saingy mendrika izany.
Glenn sy Cordell dia manazava ny fahombiazan'ny Bermuda amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany miaraka amin'ireo mpitsidika ny ankamaroany avy any Etazonia sy UK.
Horohoron-tany mangina amin'ny fandraisam-bahiny sy ny fihanaky ny fenitra